Nacho Fernandez oo mahad celin balaaran u diray jamaahiirta kooxda Real Madrid – Gool FM
Nacho Fernandez oo mahad celin balaaran u diray jamaahiirta kooxda Real Madrid
(RealMadrid) 12 Nof 2018. Difaaca kooxda Real Madrid Nacho Fernandez ayaa u mahad celiyay jamaahiirta garoonka Santiago Bernabéu, sababa la xiriira garab istaagii ay u sameeyeen, kadib markii ay Los Blancos maanta oo Isniin ah ku dhawaaqday dhaawaciisa.
Kadib baaritaanadii caafimaad uu ka maray Nacho Fernandez dhanka jilibka midig, ayaa waxay Real Madrid xaqiijisay inuu garoomada ka maqnaan doono mudo dhan 2 bolood.
Nacho Fernandez ayaa bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka wuxuu ku soo qoray fariin uu ugu mahad celinayo jamaahiirta kooxda Real Madrid wuxuuna yiri:
“Ma ahan wax fudud mudada aan garoomada ka maqnaan doono sababa la xiriira dhaawac, waxaan bilaabi doonaa inaan ka shaqeeyo hada, sida aan dib ugu soo laaban lahaa kooxda waliba sida ugu dhaqsida badan ee ugu macquulsan, waxaan u mahad celinayaa dhamaan jamaahiirta”.
Nacho Fernandez ayaa ku dhaawacmay kulankii xalay ee Axada ay kooxda Celta Vigo kula ciyaareen kulankooda 12-aad ee horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Conte oo ka warbixiyay kooxaha sanadkan ku guuleysan kara Champ' League iyo horyaalka uu xiiseenayo inuu ka shaqo bilaabo
Afar Xiddig oo ka Maqan Safka Xulka France ka hor Cayaarta Netherland